अयोध्याबारे अनुसन्धानकर्ता पौडेल भन्छन् -सक्कली अयोध्या नेपालमै,ओलीको दाबी सत्य – Satya Samachar
मुख्य पृष्ठ /समाचार/अयोध्याबारे अनुसन्धानकर्ता पौडेल भन्छन् -सक्कली अयोध्या नेपालमै,ओलीको दाबी सत्य
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नक्कली अयोध्या खडा गरेर मित्रराष्ट्र भारतले नेपाली सांस्कृतिक तथ्यमाथि अतिक्रमण गरेको बताउनुभएपछि यतिखेर अयोध्याको विषय सामाजिक सञ्चालमा चर्चाको विषय बनेको छ ।
आदिकवि भानुभक्त आचार्यको २०७ औं जन्मजयन्तीको अवसरमा मदन भण्डारी कला साहित्य प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो “हामीले हाम्रा सीतालाई भारतका राजकुमार रामलाई दिएका होइनौं, अयोध्याका राजकुमारलाई दिएका हौं, जुन वीरगञ्जभन्दा अलि पश्चिमको गाउँमा थियो” प्रधानमन्त्री ओलीले थप्नुुभयो, “अयोध्या नेपालमै पथ्र्यो, बाल्मिकी आश्रम पनि यही थियो ।”
उहाँले यति भनिसकेपछि सामाजिक सञ्जालमा एक खालको बहस शुरु भएको छ । प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभएको कुरा अयोध्या नेपालमा थियो कि भारतमा वा राम नेपाली हुन की भारतीय भन्ने बिषय यतिबेला गहन अध्ययनको बिषय बनेको छ । यसै सन्दर्भमा नेकपाका नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठले फेसबुकमा लोकमणी पौडेलको खोजमूलक आलेख राख्नुभएको छ जुन हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेका छौ ।
यदि इण्डियाको लखनऊ नजीकै रहेको अहिले अयोध्या कहलिएको ठाउँ रामजन्मभूमि होइन भने वास्तविक अयोध्या कहाँ छ त ? केवल त्यो होइन भनेर मात्रै त पुग्दैन । यो हो पनि त भन्न सक्नुपर्यो । यही सोचेर मैले आजभन्दा पाँच वर्ष अगाडी आफ्नै खर्चमा झुटो अयोध्यादेखि लिएर साँचो अयोध्याको खोजीमा केही महीना बिताएको थिएँ र जुन कुरो सामुन्ने आएको थियो त्यो पूर्ण रूपेण निश्चित नभईकन एत्तिकै बोलिहाल्न हुने कुरा पनि थिएन र इण्डियाको उच्च न्यायालयमा राम जन्मभूमिका विषयलाई लिएर मुद्दा चलिरहेकाले बिना ठोस प्रमाण केही भनिहाल्ने अवस्था पनि थिएन।
मैले त्यसपछि असली अयोध्याका बारेमा केही प्रमाणहरुको खोजी गरें। शास्त्रहरुमा भनिएका कुराहरुको पनि विद्वानहरुसँग विमर्श गरें। वाल्मीकि आश्रम पुगें। सरयू नदीका बारेमा अध्ययन गरें। सीता जमीनमा भासिएको स्थानदेखि लिएर चित्रकूट, कोशी नदी, जनकपुर, रामग्राम, अयोध्यापुरी आदि सबै ठाउँमा पुगें। अनेक पुस्तकहरुको अध्ययन गरें।
भगवान् श्रीराम भारतको लखनउ नजीकै जन्मेको भन्ने भ्रम कतिसम्म गहिरो हुँदै गएको छ भने सीतालाई हाम्री छोरी र भगवान् रामचन्द्रलाई ज्वाईं ठान्छौं हामी । भारतको लखनउ नजीक रहेको अयोध्यालाई झूटो भन्नै सक्दैनौं। तेसको पुरानो नाउँ फैजाबाद थियो।
भारतका प्रसिद्ध उपन्यासकार कमलेश्वरले सन् २००० मा प्रकाशित गरेको उपन्यास ‘कितने पाकिस्तान’ मा पनि सो लखनऊ नजीकैको अयोध्या रामको जन्मभूमि नभएको पुष्टि गरिएको छ, जसलाई नामवर सिंह, अमृता प्रितम, हिमांशु जोशी, विष्णु प्रभाकर जस्ता लेखक साहित्यकारले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेका थिए । र, भारतका सबैजसो पत्रपत्रिकामा त्यसको समीक्षा छापिएको थियो ।
जसरी अहिले केही भारतीयहरूले भारतमा रातारात नक्कली लुम्बिनी बनाएर बुद्ध इन्डियामा जन्मेका हुन् भन्ने कुरा सिद्ध गर्ने प्रपञ्च रचेका छन्, त्यसरी नै शतकौं अघि रामायणमा वर्णित अयोध्यालाई उत्तर प्रदेशको राजधानी लखनऊ नजीकै देखाएर तेसको श्रेयसँगै त्यहाँ भएको कथित बाबरीमस्जिदमाथी हिन्दूहरूले हमला गरुन् र अयोध्याको विषयलाई हिन्दू मुस्लिमबीच कहिल्यै समाप्त नहुने युद्ध छेडियोस् भन्ने अंग्रेजहरूको अभीष्ट लुकेको कुरामा दुई मत रहेन ।
१. माता सीता जन्मिएको ठाउँ जनकपुर नै हो भन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन। यो कुरालाई इण्डियनहरु ले समेत मानिरहेका छन्। यसैको आधारमा हामीले केही तथ्यहरु लाई जाँच्न सक्छौं। सीता जन्मभूमि जनकपुर र नक्कली अयोध्याबीचको सिधा दूरी पाँच सय किलोमिटर भन्दा धेरै छ । पाँच सय किमी टाढा रहेको वर्तमानको अयोध्याबाट रथमा चढेर एकैदिनमा जनकपुर आउनु पत्यारलाग्दो र सम्भव कुरा होइन । पाँच सय किमी दूरी रथबाट पार गर्न कम्तीमा पनि १५ दिन लाग्छ। रथ तान्ने घोडाहरु लगातार हिँडिरहन सक्दैनन्। बीचबीचमा घाँस–पानी खुवाउँदै लानुपर्ने हुन्छ।
२. सूननदी पतनदीको किनारमा नेपाल भित्र अवस्थित वाल्मीकि आश्रमको ऐतिहासिकता र प्रामाणिकताका बारेमा पनि कसैलाई सन्देह छैन । धोबीको कुरा सुनेर रामले सीतालाई वनबास पठाएको कुरा रामायणमा वर्णन गरिएको छ । लक्ष्मणले सीतालाई वाल्मीकि आश्रम नजीकै छाडेर उसै दिन फर्केको प्रसंग रामायणमा छ। लखनऊ नजीकैको अयोध्याबाट वाल्मीकि आश्रमको सिधा दूरी करीब ३०० किलोमिटर छ भनेपछि जाऊ आऊ गर्दा ६०० किमी पुग्छ। ६०० किमी बाटो रथ को सहायताले एकैदिनमा पूरा गर्न सम्भव कुरै होइन।
३. रामायणको अन्तिमतिर वाल्मीकिले सीता र लव कुशलाई लिएर पैदल यात्रा गरी रामलाई भेट्न गएको वर्णन छ। सीताको पवित्रताका बारेमा रामलाई अवगत गराएर सीता तथा लव कुश तीनै जनालाई रामका जिम्मा लगाउने वाल्मीकिको योजना थियो। त्यो बेला उनीहरु को भेट भएको ठाउँ अहिलेको देवघाट हो। त्यो बेला रामले सीतालाई स्वीकार गर्दा जनतामा गलत सन्देश जाने लख काटे र सहजतासँग वाल्मीकिको आग्रह शिरोपर गर्न सकेनन्।
यसबाट दुःखी भएकी सीताले धरती मातालाई पुकारिन्। धरती फाटिन् र सीता धरतीमा समाहित भइन् भन्ने वर्णन रामायणमा छ र तेसरी धर्ती फाटेको ठाउँ चितवनको देवघाटमा पर्छ। त्यो ठाउँको दर्शन गर्न अहिले पनि हजारौं तीर्थालुहरुको भीड लाग्छ। लखनऊका स्थित अयोध्यामा बसेका राम कहिलेकाहीं विश्रान्तिका लागि देवघाट आउनु तर्कयुक्त कुरा होइन। बरु देवघाट नजीकै स्थित ठाउँलाई राम विश्राम गर्नका लागि आउने भएकैले रामनगर भनिएको हुनुपर्छ।
४. रामायणमा वर्णित एउटा घटनामा शिकार खेल्दै रामका पिता दशरथ अहिलेको श्याङ्जा पर्वत र कास्कीको संगम आँधीखोलाको मुहान पञ्चासेको लेक पुगेको प्रसंग छ। उक्त दहमा श्रवणकुमारले गाग्रीमा पानी भर्दै गर्दा निस्किएको आवाजलाई कुनै जंगली हात्तीको आवाज जस्तो मानेर दशरथले पँधेरातिर ताकेर वाण चलाएका थिए। सो वाण लागेर श्रवणकुमारको मृत्यु भएको थियो।
श्रवणकुमारका दुवै मातापिता अन्धा थिए। छोराको मृत्यु थाहा पाएपछि उनीहरुले दशरथलाई पनि आफ्नै जस्तो पुत्रवियोग होस् भन्ने श्राप दिए र पुत्रवियोगको पीडाले बूढाबूढी धेरै दिनसम्म त्यो श्रवणकुमारले पानी भर्न खोजेको दह नजीकै बसेर रोइरहे। श्याङजामा अहिले पनि अन्धाअन्धी दहका नामले प्रसिद्ध कुवा छ र त्यो दह नै आँधीखोलाको मुहान हो। अहिले मानिरहेको नक्कली अयोध्याबाट शिकार खेल्न पाँच छ शय किमी पर आउने कुनै सम्भावना हुन्छ त ?
५. रामका चारै जना दाजूभाईलाई सानै छँदा दरबारमै पुगेर पढाउने गुरु वशिष्ठको जन्मभूमि पनि नेपाल नै भएको पुष्टि गर्ने धेरै आधारहरु छन् । रामहरु किशोर भएपछि धनुर्विद्या आदि सिकाउने गुरु विश्वामित्रसँग जोडिएको एउटा प्रसंग रामायणमा छ । जसमा विश्वामित्रसँगै राम लक्ष्मणले कोशी नदी तरेको उल्लेख छ । त्यो कोशी नदी अहिले नेपालमै बगिरहेको कोशी नदी हो भन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन । अहिले मानिरहेको लखनऊ नजीकैको अयोध्याबाट घुम्दै हाम्रो कोशी नदीसम्म आइपुगेको कुरा पत्याउन सकिँदैन ।
लखनऊमा रहेको अयोध्या सक्कली होइन र विभिन्न तथ्यांकहरुले त्यसलाई रामको जन्मभूमि सिद्ध गर्न सक्दैनन् भन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि हाम्रा अगाडी अर्को प्रश्न तेर्सिन्छ, त्यसोभए सक्कली अयोध्या कुन हो र कहाँ छ ? यसका लागि विभिन्न किसिमले अध्ययन गर्दा हामी नेपालको चितवन जिल्लामा अवस्थित माडीमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । केही समय पहिले सम्म त्यहाँ स्थित एउटा गाविसको नाउँ अयोध्यापुरी रहेको थियो।
अहिले माडी नगरपालिका भएपछि अयोध्यापुरी क्षेत्र वडा नम्बर ७ र ८ भित्र समेटिएको छ। जो प्राचीन समय देखि नै अयोध्यापुरी कै नामले जानिन्थ्यो। जुन कुरा महाभारतमा समेत उल्लेख गरिएको भेटिन्छ । अयोध्यालाई प्रायः अयोध्यापुरी भनिन्थ्यो। त्यो क्षेत्र नै वास्तविक अयोध्या हुनुपर्छ। एसका लागि केही तर्कहरु को सहारा लिनुपर्ने देखिन्छ ।
१. सो ठाउँबाट जनकपुरको सिधा दूरी करीब १५० किलोमिटर पूर्वमा पर्छ भने वाल्मीकि आश्रम करीब ३५ किलोमिटर पश्चिममा पर्छ । त्यहाँबाट रथमा चढेर एकैदिनमा वाल्मीकि आश्रम पुगेर फर्कन सम्भव छ । जो प्राचीन समयदेखि नै अयोध्यापुरीका नामले प्रसिद्ध छ त्यो नै सक्कली अयोध्या हो भन्ने महसूस हुन्छ।
२. सरयू नदीको प्रसंग : संस्कृतमा सरको अर्थ ताल छहरो पोखरी आदि हुन्छ । त्यो हिसाबले सरयू भनेको सरबाट बगेर आएको नदी। सरयूको अर्को नाम सरस्वती पनि हो। सरस्वतीलाई पारावतघ्नि पनि भनिन्छ। त्यसको अर्थ पर्वतलाई खियाएर, चिरेर, घात गरेर बग्ने नदी हो। अयोध्यापुरी वरिपरि नै सरयूको खोजी हुनु आवश्यक भएको छ।
३. देवघाटसँगै मात्र होइन माडीभन्दा केही दक्षिण तर्फ पनि रामनगर नामक गाउँ अवस्थित छ । उक्त रामनगरको नाम पनि महाभारतमा उल्लेख छ। तनहुँको सेन राज्यको हिउँदकालीन राजधानी रहेको सो रामनगर हाल भारतीय सीमा भित्र पर्छ। वरिपरि राम जोडिएका ग्राम र नगरहरुको उपस्थितिले पनि अयोध्यापुरीलाई सक्कली अयोध्या साबित गर्न मद्दत गर्दछ।
४. अहिलेको अयोध्यापुरीदेखि पश्चिम नारायणी नदी पार गरेपछि रामग्राम आउँछ। अयोध्यापुरीदेखि उत्तरतिर रामपुर छ। अयोध्यापुरीदेखि पूर्व सुनसरी जिल्लाको जंगलमा रामले धुनी जगाई आगो तापेको ठाउँ अद्यापि रामधुनीका नामले प्रसिद्ध छ। उता देवघाटसँग जोडिएको रामनगर पनि बिर्सन हुँदैन। पाल्पामा पनि रामपुर छ। रामपुरसँगै काली नदीको किनारमा रामघाट छ जहाँबाट राम अन्तर्ध्यान भएका थिए। रामायणमा रामले आफ्नो राज्य विस्तार गरेको प्रसंग उल्लेख छ। वरिपरि का रामनामयुक्त ठाउँहरु रामले विजय प्राप्त गरेका ठाउँहरु हुन सक्छन्।
सर्वप्रथम त यो कुराको महत्त्व र बृहद् पक्षको गोरवपूर्ण अनुभूति हामी सबैमा हुनुपर्छ। यो धेरै ठूलो कुरा हो। यसतर्फ नेपाल सरकारको समेत ध्यान जानु अपरिहार्य छ। यस्तो सत्य कुराको थप अनुसन्धान गरी प्रचार प्रसार गरेर बुद्धको मात्र होइन, रामको जन्मभूमि पनि नेपाल नै भएको कुरा विश्वसामु राख्नुपर्छ । राम जन्मभूमिको विवादलाई लिएर इन्डियाको अयोध्यामा हजारौं मानिसहरूको ज्यान गइसकेको छ र केही महीना अगाडी अदालतले फैसला गरे पनि मानिसहरुको दिलोदिमागमा झगडा यथावत् छ ।
रामायणमा वर्णित सरयू नदी माडी या नारायणी या राप्ती मध्ये कुनै एक हुनुपर्छ । यी तथ्यहरूले रामको जन्मभूमि नेपाल नै भएको सिद्ध गर्ने हुँदा भगवान् राम हाम्रा ज्वाइँ होइनन्, हाम्रै देश का सन्तान हुन्, छोरा हुन् भन्ने कुरालाई सगर्व हृदयङ्गम गर्नुपर्छ । वाल्मीकि आश्रम अहिले पनि नेपाल मै पर्ने कुरा सबैले जानिआएको र मानिआएको विषय हो। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा पर्सा वन्यजन्तु आरक्षको दक्षिणी सिमानामा अवस्थित वाल्मीकि आश्रममा नेपाल कै भूमि भएर पुग्न वर्तमानमा सहज छैन।
अहिले पनि त्रिवेणीबाट नारायणी पार गरेर भारतको टंकी बजार पुगी भारतकै वाल्मीकि बाघ संरक्षण क्षेत्र हुँदै सुननदी र पतनदी तरेर आश्रम पुग्नुपर्ने अवस्था छ। नेपाल सरकारको पर्यटन मन्त्रालयले यस विषयमा ध्यान दिनु जरुरी छ। सो क्षेत्रको संरक्षण, सम्बर्धनसँगै नेपालभित्रबाटै पुग्न सकिने बनायौं भने धार्मिक पर्यटनको थप विकास हुने थियो।
यसको थप अनुसन्धान गरी प्रचारप्रसार गरेर बुद्धको मात्र होइन रामको जन्मभूमि पनि नेपाल नै भएको कुरा विश्वसामू राख्नु पर्छ । अनि इण्डियासँग हाम्रो झुकेको नाता (सीताको माइती भएका कारण)लाई समाप्त गरिनुपर्छ ।
राम जन्मभूमिको विवादलाई लिएर इण्डियाको अयोध्यामा हजारौं मानिसहरुको ज्यान गइसकेको छ र झगडा यथावत् छ । रामायणमा वर्णित सरयू नदी माडी या नारायणी या राप्ती मध्यै कुनै एक हुनुपर्छ । यी तथ्यहरुले रामको जन्मभूमि नेपाल नै भएको सिद्ध गर्ने हुँदा भगवान् राम हाम्रा ज्वाईं होइनन् हाम्रै देश का सन्तान हुन् छोरा हुन् भन्ने कुरालाई सगर्व हृदयंगम गर्नुपर्छ ।
(नेकपाका नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठको फेसबुकबाट यहाँ साभार गरेका हौं ।(सम्पादक)